एसएसपी खत्रीको बयान–सुन नै नभेटी सुन तस्कर भन्न मिल्छ? | Jukson
एसएसपी खत्रीको बयान–सुन नै नभेटी सुन तस्कर भन्न मिल्छ?
झन्डै दुई महिना गायब भएका साढे ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा अदालतमा आफैं हाजिर भएका एसएसपी श्याम खत्रीले सुन नै नभेटी सुन तस्कर भन्न नमिल्ने तर्क पेश गरेका छन् । मोरङ जिल्ला अदालतमा बिहीबार बयान दिँदै एसएसपी खत्रीले विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुने गरेको कुरा आफूलाई जानकारी समेत नभएको बताएका छन् ।
खत्रीले सुन तस्करीमा आफ्नो संग्लनता नरहेको बताउँदै आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । खत्रीले आफूले एकपटक गोरेलाई हप्काएर पठाएको पनि बताएका छन् । बयानमा क्रममा गोरेले आफूलाई डीआईजी गोविन्द निरौलाको व्यक्ति भन्दै नटेरेको बताएका छन् । श्याम खत्रीले गोरेसँगको संग्लनता अस्वीकार गरे पनि गोरेले भने सबै कुरा एसएसपी खत्रीलाई नै थाहा भएको बयान दिएका थिए ।
गोरेले बयानका क्रममा खत्रीले सुन निकालेबापत प्रतिकेजी ५० हजारका दरले कमिसन लिँदै आफ्नै गाडीमा राखेर बाहिर निकाल्ने गरेको बयान दिएका थिए ।
मोरङको जिल्ला कारागारमा एसएसपी खत्री र गोरे
गाई–भैंसीको दुधभन्दा स्वादिलो साङ्लोको दुध बजारमा भित्रियो
दार्जि्लिङमा पलका युवती फ्यान ः ‘रुने’ देखि ‘चिच्याउने’ सम्म !
पूर्वसभाध्यक्ष नेम्वाङलाई दिने भयो सरकारले ६० लाखको गाडी